Global Voices teny Malagasy » Armenia – Azerbaidjana : Tanora Bilaogera Mamita Iraka Hameno ny Hantsana Jeopolitika · Global Voices teny Malagasy » Print
Armenia – Azerbaidjana : Tanora Bilaogera Mamita Iraka Hameno ny Hantsana Jeopolitika
Voadika ny 18 Mey 2018 13:10 GMT 1	 · Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika (fr) i Suzanne Lehn, avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Armenia, Azerbaijan, Etazonia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Teknolojia, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Janoary 2009)
Efa ho 15 taona, rehefa nangatsiatsiaka ny fifandonan'i Armenia sy Azerbaidjana momba ny faritra Haut-Karabagh , taorian'ny fifanarahana fampitsaharana poabasy, mbola tsy azo antoka ny hisian'ny fandriampahalemana maharitra ary vitsy amin'ireo teratanin'ny firenena roa tonta no mba nanana fotoana nihaonana sy nifandraisana. Mety hiova anefa izany, miaraka amin'ny DOTCOM, tetikasa iray vatsian'ny Birao misahana ny raharaham-panabeazana sy kolontsaina ao amin'ny Departemantam-panjakàna Amerikàna, ary tanterahan'ny Tetikasa Mirindra (Harmony).
Nanangona tanora niisa 90, Amerikàna, Armeniàna ary Azéris, teo anelanelan'ny 14 sy 16 taona, izay hampiasa ireo fitaovan'ny Aterineto toy ny bilaogy mba “hamoronana media iray hifototra amin'ny resaka sosialy misy fiantraikany amin'ireo vondrom-piarahamonina manerana an'i Etazonia sy Kaokazy.» [28/1/2009], nitafa fotoana fohy tamin-dRtoa Elizabeth Metraux, talen'ilay fandaharanasa DOTCOM ny Global Voices.
Ny fanantenana ho an'ireo ankizin'ny DOTCOM, dia izy ireo mahazo ny fahaizamanao sy ny fitokisana mba hirotsaka anaty adihevitra misy ventiny momba ireo lohahevitra manandanja. Manana zavatra maro hambara momba ilay fifandirana ireo ankizy ireo, momba ny fahantràna, ny zon'olombelona, ny fanabeazana. Natao ny DOTCOM mba hampianatra ireo ankizy hampiasa ny media sôsialy ho fitaovana iray hanainga fiovàna amin'ireny olana mavaivaiy ireny.
Rehefa jerena ireo fitsaratsarampoana miiba atao amin'ny ‘ankilany’ avy amin'ireo mediam-pirenena avy amin'ireo firenena roa ireo, tsy ho mora ny asa miandry, fa ny bilaogin'ny sasany amin'ireo tanora ireo dia efa nanomboka sahady nipoitra tety anaty aterineto. Na dia sarahan'ny sisintany mikatona sy ny tsipiky ny fampitsaharana poabasy aza ry zareo, dia ho afaka ihany kosa ireo tanora ny hanao topimaso amin'ny fiainan'ny andaniny sy ny ankilany, na dia tsy misy afa-tsy ny ety anaty aterineto aza, mandra-piandry ny Jolay hihaonan'ireo tanora 10 avy amin'ny firenena tsirairay any Etazonia.
Vao avy noforonina mihitsy ireo bilaogy ary mbola vitsy ireo lahatsoratra nivoaka, saingy ny Global Voices dia maniry ny tetikasa mba ho tafita ary manantena hamokatra fintina tsy tapaka avy amin'ireny bilaogy ireny, arakaraky ny fisian'ny lahatsoratra vaovao mivoaka. Mandra-piandry an'izay, na mety hisy aza ireo sakana tsy maintsy dinganina, izay mety tsy ho laitra mihitsy ny sasany, Edita, 15 taona, avy any Armenia,manome tsirim-panantenana iray  (amin'ny teny anglisy, toy ny rohy rehetra hanaraka ato anaty lahatsoratra).
Noho ny fisian'ny DotCom, tiako ny hahita tetikasa iray vaovao hiforona ary hahafahanay mahita vondrom-piarahamonina misy kolontsaina sy endri-piainana eo amin'ireo tanora Armeniàna, Amerikàna ary Azéris. Izany dia hanome anay fahafahana hametraka fampiraisana ara-kolontsaina.
Ao anaty fanehoankevitra iray amin'ny bilaogin'i Dilara, ankizivavy iray 14 taona monina any Bakou, renivohitr'i Azerbaidjana, ary ankizivavy iray hafa mpandray anjara avy any Armenia, Nare, 15 taona,no maneho hevitra mitovitovy hoe  :
Arahaba Dilara :))) Faly mahafantatra anao 🙂 Armeniàna aho ary te-hahafantatra misimisy kokoa momba an'i Azerbaidjana !!! Mihevitra aho fa tena hahaliana ny fiasàna miaraka :)))
Samira, 15 taona, dia manantena koa hahita namana vaovao  amin'ny alàlan'ilay tetikasa.
Tiako ny mifandray aminà olona samihafa. Isan'ny antony fototra nisoratako amin'ity tetikasa ity, dia ny hahita namana betsaka ato aho, ary mba hianatra lalindalina kokoa ny tsiambaratelon'ny media. Tia mamaky lahatsoratra momba ny kolontsain'ny firenena hafa aho. Mino aho fa hahay zavatra betsaka avy amin'ity tetikasa ity.
Azeri iray hafa mpandray anjara i Samir, 16 taona, avy any Bakou, maneho fanantenana tahàka izany koa :
Heveriko fa zavadehibe ny manamafy ny fifandraisana eo amin'ny samy firenena, mampitsahatra ny fifandonana ifanaovan'ny firenena ary ny mametraka fifamatorana ara-kolontsaina sy siantifika.
Ato ny tranonkalan'ny DOTCOM : http://dotcom.ph-int.org  ary manana pejy iray ao amin'ny Facebook, ato . Ao amin'io rohy io, misy bilaogy iray ihany koa afaka jerena, izay noforonina mba hahafahana manolotra ireo singa samihafa ho any amin'ireo mpandray anjara. Betsaka amin'ny bilaogin-dry zareo no vita lisitra ao anatin'ireo pejy mombamomba ireo talen'ilay fandaharanasa ho an'i Armenia  sy Azerbaidjan a.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/18/119720/
 manome tsirim-panantenana iray: http://dotcomeditae.blogspot.com/2009/01/answers-to-questions.html
 no maneho hevitra mitovitovy hoe: http://dotcomdilarav.blogspot.com/2009/01/my-hobby.html#comments
 hahita namana vaovao: http://dotcomsamirai.blogspot.com/2009/01/media-and-me.html
 maneho fanantenana tahàka izany koa : http://dotcomsamirk.blogspot.com/